Kharashka Warbaahinta Bulshada sida ku cad Fortune CMOs
The CMO Survey wuxuu ururiyaa oo faafiyaa fikradaha suuqleyda sare si loo saadaaliyo mustaqbalka suuqyada, loola socdo heerka sare ee suuqgeynta, loona hagaajiyo qiimaha suuqgeynta shirkadaha iyo bulshada.
Bootaan fure ah, taas oo Xajka Suuqgeynta ayaa tilmaamay, in laga filayo kharashaadka warbaahinta bulshada growth koritaanka isdaba jooga ah ayaa si xoogan loogu taageeray sahanka dhexdiisa.
La aasaasay bishii Ogast 2008, The CMO Survey waxaa lagu qaadaa sanadkii labo jeer iyadoo la adeegsanayo sahaminta internetka. Su'aalaha waxay ku soo noqnoqdaan waqtiga si isbeddellada loo ogaan karo. Mawduucyo gaar ah ayaa loo soo bandhigayaa sahan kasta - Kani waa maamulkii 6-aad.
Tags: 2011sahaminta cmowarbaahinta bulshadakharashka warbaahinta bulshada
Waa Kuma Mashiinka Raadinta Qalabkaaga Suuqgeynta?